I-Synthetic Customization Cofttek
Amasheya e-Cofttek anqunyelwe
I-86 (1892) i-9367792
Ukwenza ngokwezifiso zokwenziwa
I-Cofttek ye-Drug Discovery iyisisombululo esisefu, nesisombululo sokuhlaziya okuhlaziya ulwazi lwesayensi nolwazi ukuze kudalulwe ukuxhumana okuyaziwayo nokufihliwe okungasiza ekwandiseni amathuba okuphumelela kwesayensi.
Ipulatifomu ivumela abacwaningi ukuba bakhiqize imibono emisha ngosizo lwama-visualizations ashukumisayo, izibikezelo ezisekelwa ubufakazi kanye nokusetshenziselwa kolimi lwezemvelo eziqeqeshwe esizindeni sezesayensi yokuphila.
I-Cofttek Yokutholakala Kwezidakamizwa ingasheshisa ukuhlonza ukukhethwa kwezidakamizwa zamanoveli nezinhloso zemithi yamanje ngokubambisa amandla okudatha enkulu.
Umkhiqizi wama-Reagents amancane ne-Kinase Inhibitors.
Njengomkhiqizi ohola umhlaba we-molecule encane ye-antiticancer reagents nama-kinase inhibitors, i-Cofttek inikeza izinkulungwane zamakhemikhali emanyuvesi,
Sitshele noma Gcwalisa Ifomu
Unganqikazi ukuxhumana nathi
Vimba i-2 ye-West Innovation Park, uHenan National University Technology Park
© Copyright 2018 COFTTEK. Konke Okulungisiwe www.aasraw.com www.buyaas.com www.apicmo.com www.phcoker.com